WPML: Ku Tarjun Bogaga WordPress-ka ah Qalabkan Luqadaha Badan iyo Adeegyada Tarjumida Ikhtiyaariga ah | Martech Zone
WPML waa halbeegga wax soosaarka ee soo saarista iyo tarjumida waxyaabahaaga kujira barta WordPress ee luqadaha badan. Waxaan hadda wadaa GTranslate plugin ku saabsan Martech Zone si loo sameeyo tarjumaad mashiin oo luqado badan ku tarjumeysa. Tani waxay ballaarisay marinkeenna adduunka iyo sidoo kale taraafikada mashiinka raadinta ee boggeyga.
Waxaan ka shaqeyneynaa sidii loo geyn lahaa goob loogu talagalay macmiil hadda ay ku nool yihiin dad badan oo Hispanic ah. In kasta oo aaladda sida GTranslate ay sifiican u tarjumi karto mashiinka, ma ahan inay qabato nuqulada lahjad ee dhagaystayaasheena waaweyn ee reer Mexico iyo Mareykanka ee aan rajeyneyno inaan gaarno. Taas awgeed, waxaan u tarjumeynaa xirfad ahaan waxyaabaha ku jira saameynta ugu badan.
Tarjumaadda gaarka ahi waxay u baahan tahay xal ka duwan, hoggaamiyahana waxyaabaha ku jira tarjumaadda WordPress waa WPML.
Sida Loogu Turjumo Boggaaga WordPress-ka WPML
Astaamaha WPML Ku dar
WordPress - U turjun qayb kasta bartaada WordPress, oo ay ku jiraan marinnada, qalabka wax lagu dhejiyo, bogagga, maqaallada, noocyada boostada caadiga ah, ama walxo kale. WPML sidoo kale waxay taageertaa tifaftiraha Gutenberg.
Languages - WPML waxay la timid in ka badan 40 luqadood. Waxa kale oo aad ku dari kartaa luqadahaaga noocyada kala duwan (sida Canadian French ama Spanish Spanish) adoo adeegsanaya tifaftiraha luqadaha WPML.
Qaabka URL - Waxaad ku diyaarin kartaa waxyaabaha ku qoran luqadaha kala duwan isla bogga (buuggaagta luqadaha), hoosaadyada hoosaadyada, ama bogagga gabi ahaanba ka duwan.
Tarjumaadda Mashiinka - Ka hel headstart tarjumaaddaada adoo adeegsanaya tarjumaadda mashiinka si aad waqti yar u haysato oo kharashka adeegga tarjumaaddu uu hoos ugu dhaco.
Tarjumaadda Isticmaalaha - Isticmaalayaasha caadiga ah ee WordPress u rogo turjumaanno. Turjumaanada waxay heli karaan oo kaliya shaqooyinka turjumaada gaarka ah ee Maamulayaasha Tarjumaada ay u xilsaaraan.
Adeegyada Turjubaanka - Ku xir WPML maareynta tarjumaadda awoodda leh adeegga tarjumaadda aad dooratay. Si habboon ugu dir nuxurka tarjumaadda tooska ah Dashboardka tarjumaadda WPML. Markii turjumaaduhu dhammaadaan, waxay dib uga soo muuqanayaan boggaaga, iyagoo diyaar u ah daabacaadda.
Mowduuca iyo Turjumaadda Xarigga Muuqaalada - WPML ayaa kaa xoreynaysa dhibaatada ka imaaneysa tafatirka faylasha PO iyo soo dejinta feylasha MO. Waxaad si toos ah uga turjumi kartaa qoraallada agabyada kale iyo shaashadaha maamulka Tarjumaadda Xariga interface.
Taageerada Luqadaha Kala Duwan ee WooCommerce
WooCommerce kula socod boggaga e-commerce ee luqadaha badan ku hadla. Ku raaxayso taageerada dhammaystiran ee alaabada fudud iyo kuwa isbeddelka leh, alaabada la xidhiidha, iibinta iyo dallacsiinta, iyo wax kasta oo kale oo ay WooCommerce bixiso.
WPML ayaa ku tusinaysa qoraalada u baahan tarjumaada waxayna kuu dhisayaan dukaanka turjuman oo dhameystiran. Soo-booqdayaashu waxay ku raaxeysan doonaan habka wax-iibsiga oo dhammaystiran, oo ka bilaabanaya liistada wax soo saarka, iyada oo loo marayo gawaarida iyo ka-bixitaanka, iyo xitaa emayllada xaqiijinta deegaanka.
Uma baahnid inaad sameyso wax gaar ah si aad u abuurto mowduucyo ku hadla luuqado badan. Kaliya isticmaal howlaha WordPress API iyo WPML waxay daryeeshaa inta hartay.
Soo Degso WPML
Shaacinta: Waxaan ku xirnahay WPML.
Tags: luuqad badanwordpress luqado badanqaab dhismeedka luqadaha kala duwanturjumaada pluginadeegyada tarjumaaddaTarjumaadda WooCommerceWordPresstarjumaadda wordpresswordpress plugin turjumaadwpml